RHCSA Mazano Okuongorora - Ungapedza Sei RHCSA Exam? - ITS Tech School
Mazano ekuongorora kweRHCSA
RHCSA inongororo yeRuff Hat Enterprise Linux system sangano remashoko uye maitiro apo vane tariro vanoedzwa nekuda kwekuita sangano. Mushure mokunge mawana chiziviso, iwe uchave wakakwanisa kushanda muRud Hat Enterprise Linux mamiriro ezvinhu. Kungofambira mberi uye uwane mazano mashomanana angakubatsira muRHCSA Certification Exam.
Yakawanda Mazano Azvino kuRHCSA Exam
Ongorora nokuda kwekusakwana: Kuti iwe upfuure chero upi zvapi, kuedza hakugoneki. Ndizvo zvakaitawo neRHCSA. Sezvo ichi chiri maoko-kuongorora, haukwanisi kudzidza pfungwa nemoyo. Shandisa PC yako ikozvino uye utange kushanda kuburikidza nemabasa acho chero ipi zvayo, zvinongotevera kupotsa mazano. Zvakakosha kuziva izvo iwe unoda chaizvo kuita.
Time administration: Iko kuongorora kunotsvaga uye iwe unogona kunge usina nguva yakakwana pedyo nayo. Nyora mubasa rako uye uedze kupedzisa zvikamu zviduku zvinoda kutanga nechinangwa chaunowedzera chimwe chechokwadi. Iwe unogona kuenda ipapo kune avo vamunonzwa kuti zvinetso. Ramba uchifunga kuti unozviedza ivo vanotanga kukanganisa tani yenguva yako nenzira iyi zvichiita kuti uzvidye mwoyo.
Ngwarira zvinangwa: Kana iwe uri mutariri akabudirira, unogona kuwana chikamu chekuenda kwacho nyore. Iva sezvazvinogona, pamusoro pezvinhu zvakaoma, iwe unorasikirwa netariro. Ramba uchifunga mupfungwa iyo nhamba yakafanana yeyanyanzvi yakakonzera muchikonzero chekuti havana kurega kunzwisisa zvinangwa.
Fukidza zvinhu zvose: Pano pane mazano akawandisa ezvidzidzo zvakabatanidzwa muchidzidzo uye iwe usingazivi zvose. Iwe unogona kunge wakazadzisa sehurongwa hwehurongwa kwenguva yakareba zvakadaro, Red Hat Certified System Administrator exam inoda zvimwe. Mutungamiri anowanzotarisa pane nhamba yakatarwa yezvikamu uye angave asina kukwanisa munharaunda kunze kwekupedzisira. Paunenge uchigadzirira kuongorora, unoda kusundira kuvhara imwe neimwe yemitambo uye kunzwisisa zvinowedzera kuvandudzwa.
Chinonyanya kukosha ndechokuti kuongorora hakusi nyore sezvaunofunga. Izvo basa rinokutadzisa iwe kuita zvinyorwa zvokwadi zvinokumbira kudzidza kwakakwana uye unyanzvi. Nokudaro, vimba netsika yakawanda yekuvimbisa kuti haufaniri kurega pakati pehurukuro.